E nwere onye na-agwụcha ndepụta nke mgbaghoju anya egwuregwu na merie ihe ebigh'ebi mmasị site egwuregwu ndị hụrụ na e nwere ọzọ ogologo ndepụta dị otú ahụ egwuregwu na emewo ka ọtụtụ ndị nke crazy Fans, riri ahụ nke ebre na n'idozi mgbaghoju anya. Taa, ohere nke ndị mmadụ dị otú ahụ egwuregwu e ukwuu facilitated na iwebata android mgbaghoju anya egwuregwu. Ya mere, ugbu a, onye ọ bụla na onye ọ bụla nwere mfe android ekwentị nwere ike na-enwe egwuregwu ndị a na nke na-agaghị na-enwe a fun kamakwa akwa aka maka jisie na ebe nchekwa na boosting echiche ọrụ na-emecha na-eduga ná mma mmụta. E nwere nza nke free android egwuregwu, Otú ọ dị ole na ole n'ime ha ga-eri gị ole na ole dollar ma ọ bụ a nzọ na ha dị oké ọnụ ahịa ịzụta dị ka mma.
Ya mere, ebe a bụ ụyọkọ iri egwuregwu na merie obi nke android mgbaghoju anya egwuregwu ndị hụrụ maka ọtụtụ ihe mere gụnyere gburugburu, ndịna-emeputa, egwú mmetụta na n'elu ihe nile ihe omimi ahụmahụ na uche na-afụ egwuregwu mgbagwoju anya.
1. Ncheta Valley
Platform: Android 2.3.3 bụ kacha nta ina nke egwuregwu.
A zuru ezu audio-visual na-emeso abịa na na nke a mgbaghoju anya egwuregwu. Player Ga-eduzi obere Princess na nrọ okwu si n'ụwa ije na-emeri ọzọ na ndị ọzọ scores.
Platform: Opekempe ina nke OS maka ịkpọ egwuregwu a bụ Android 4.0.
Ọ bụrụ na ndị egwuregwu a gaara categorized na ọdịda na-akpa àgwà ka mara mma mgbe ahụ threes gaara na n'elu nke ndepụta. Adịghị ya iyi na-eme uche? Mgbe ahụ ibudata na kpọọ nọmba a kenha mgbaghoju anya na-aghọta na otú ihe ziri ezi okwu cuteness bụ n'ihi na "Threes".
3. Ọchịchịrị Echo
Aha egwuregwu a bụ onwe ya mara mma na isiokwu bụ nnọọ akwụkwọ. Ọ bụ dị ka na-adọrọ mmasị dị ka echiche nke visualizing ụda, ihe ọhụrụ onye ma na-akwọ ụgbọala ndị crazy nọrọ ndụ na 80 etoju nke egwuregwu. Game bụ banyere ka egwu ịgba ọsọ otu obi ma na-eme ka uche anya nke eziokwu ahụ bụ na a gbara ọchịchịrị ụzọ ebe ọ bụla ụda na-abụghị nanị bounced azụ ma mee ka ihe ọjọọ nso.
Platform: Opekempe OS ina maka egwuregwu bụ Android 2.3.
Lyne bụ a zuru okè na ndị bara uru nkọwa nke sị "Mfe bụ kacha sophistication.". Ee, ọkpụkpọ nwere ike iche na ọ bụ nnọọ mfe aka a dị mfe set nke egwuregwu mgbagwoju anya ma oge ọ / ọ na-amalite na-akpọ ya, ihe ndị bụ eziokwu na-ekpughe na ọ bụ adịghị mma ileda ya nwere nke rụọ ọrụ n'uche.
Platform: Android 3.0 na elu
Nke a agha egwuregwu bụ na-achịkwa onye iro site n'iwu na nkeji. Nke a bụ ihe echiche Nkea n'ihi ọsọ ọsọ na Nkea ga-agwụ na fiasco.
Ahịa: $ 4.9
Platfrom: Android 2.3.3 bụ kacha nta chọrọ n'ihi na os.
Nke a bụ otu nke mgbagwoju anya egwuregwu na-adịghị uche. -Eduzi ndị gị n'ụlọnga-47 na ẹkedọhọde njedebe nke ọ bụla larịị ma nke ahụ abụghị na mfe, na ihe mere na ọ bụ a mgbaghoju anya egwuregwu.
Platform: Opekempe OS maka Blockwick 2 bụ Android 4.0.
Ọ bụ a yi ara maka gbakọta otu na agba blocks na 160+ etoju. O nwere ike iyi nnọọ ihe dị mfe ọrụ na mbụ ma ọ bụ n'ezie bụghị na mfe.
Platform: Opekempe OS maka ịkpọ egwuregwu a, bụ Android 4.0.
Ọ bụ ihe na ngagharị nke ị na-amaghị ma na-adọrọ mmasị ụwa. Ihu ọma egwuregwu bụ iji nweta a helikopta nke iju ụwa ma ugbu ọkpụkpọ ọfiọkde na e nwere ọtụtụ ihe karịrị nanị na-chopper si. The amamihe e 3D ụwa awade ọkpụkpọ ihe na-akpali ngwakọta nke abụọ; mfe na ike aga-eme na na-mmadụ nkwa ọlụlụ awa, na-enweghị na-atụba onthem a echiche nke ahuokika.
Skyward bụ mgbaghoju anya ebe elu a ọkpụkpọ-aga na mgbaghoju anya, na elu a onye ga Akara na mbara igwe bụ ịgba. Oge ọ bụla nnye intrigues na scorer iti ya / ya onwe gara aga ndekọ.
Platform: Android 2.2 bụ kacha nta OS chọrọ
Ndị na-ukwuu chọrọ kwupụta na agba, KAMI bụ nke zuru okè egwuregwu n'ihi na ha. Gịnị na-eme ya otú na-adọrọ adọrọ bụ obinkoneelu na ihe ga-agba na-kpughere site ọ bụla pịa n'ihi na a kpọmkwem set nke Nkea, na ihuenyo kwesịrị ka a acha na-acha a otu ndo site mkpughe iberibe akwụkwọ.
> Resource> emulator> Top 10 Puzzle Games maka Android